Phone မရှိဘဲ Gmail Account ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ — MYSTERY ZILLION
Phone မရှိဘဲ Gmail Account ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ
June 2011 edited March 2013 in Internet & Email
<del>Gmail Account ဖွင့်တဲ့အခါ Google က verify လုပ်ဖို့အတွက် Phone နံပတ်တောင်းပါတယ်။ အရင်ကလို E-Mail နဲ့တင်မရတော့ပါ။ Phone နံပတ်ပေးတဲ့အခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို မထောက်ပံ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ Phone မရှိဘဲ Account ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ Phone နံပတ်ကို အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ Google ကဆိုပါတယ်။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက Google Account ဖွင့်လို့မရတော့ဘူးလား ? ဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်း တကယ်ပဲ Google ထောက်ပံ့တဲ့နိုင်ငံက Phone နံပတ်တစ်ခုလိုနေပြီးလား ? အဲဒါလေးသိချင်လို့ပါ။<br></del>
<center><img src="http://i1131.photobucket.com/albums/m556/winmyotun/Mysteryzillion/g_account_1.jpg"><br><img src="http://i1131.photobucket.com/albums/m556/winmyotun/Mysteryzillion/g_account_2.jpg"></center><br><hr width="100%" size="2"><center>
<font color="red"><b><font size="5">Update: </font></b>ကျွန်တော် ဒီDiscussion ကို ရေးခဲ့ချိန်ဟာ June 2011 ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက Google က မြန်မာနိုင်ငံရှိ Phone နံပတ်များကို Support ပြုလုပ်ခြင်းမရှိသေးပါ။ အဲဒီအချိန်က မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေးပိတ်မှုများရှိသဖြင့် Google တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ Phone နံပတ်များဖြင့် တရားဝင်ပြုနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ယခုအခါမှာတော့ Google မှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ Phone နံပတ်များအား တရားဝင် အသိမှတ်ပြု ထောက်ပံ့ပေးနေသည်မှာ အချိန်တော်တော်ကြာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ Google account ကို ပြုလိုက်နိုင်ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်မှာ Phone မရှိခဲ့ရင်လည်း android os ကိုအသုံးပြု၍ [ Setting >> Account & Sync >> add account >> google >> create ] အလွယ်တကူ account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှနေ၍ account ဖွင့်ပါက Phone နံပတ်ပေးရန် ယနေ့အချိန်ထိ လုံးဝမလိုပါ။
ထိုကြောင့် phone ရှိရင် phone နံပတ်ပေးပြီး အလွယ်တကူဖွင့်နိုင်သလို phone မရှိပါကလည်း android ပေါ်မှနေ၍ Google account ကို အလွယ်တကူဖွင့်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
<a href="http://www.winmyotun.com">www.winmyotun.com</a>; [ 15 March 2012 ]
i also want to know.how to do this.
ကျွန်တော်ကတော့ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ချင်ရင် အချိန်နည်းနည်းယူတယ်ဗျ။ ကြုံရင်ကြုံသလို sign up လုပ်ကြည့်တယ်။ တစ်ခါတလေကျရင် ဖုန်းမတောင်းပဲရတတ်တယ်။ အဲဒီအခါမျိုးကျတော့ ၄-၅ ခုလောက် လုပ်ထားတာပေါ့။ ဘာလို့မှန်းတော့မသိဘူး။ တစ်ခါတလေကျရတယ်။ တစ်ခါတလေလည်းရဘူး။ ရတုန်းတော့ ကိုယ်လိုတဲ့အကောင့်အပြင် နောက်ထပ် ၃ ခုလောက်အပိုဖွင့်ထားတတ်တယ်။ နည်းနည်း general ကျမယ့် nick တွေနဲ့ အပိုအကောင့်တွေလုပ်ထားပြီး လိုတဲ့လူတွေ့ရင် ပေးလိုက်တယ်ဗျ။ nick တွေကတော့ သူတို့စိတ်ကြိုက်မဖြစ်ဘူးပေါ့။
Use ultrasurf or yourfreedom. Use DH server in freedom.
Here's another method. (I have just recently used it to openanew account for my aunt. And it works.)
2. Type "http://mail.google.com";
ကျွန်တော်ဆီမှာ Your Freedom, Ultrasurf စတဲ့ Software များနဲ့ Free Proxy Site တွေသုံးပြီး ဖွင့်လည်းမရပါ။ Phone နံပတ်က တောင်းမြဲတောင်းနေပါတယ်။ အစကတော့ IE နဲ့ဖွင့်တာ ရတယ်။ အခုတော့ မရတော့ပါ။
register လုပ်ရင် myanmar မထားရင်ရပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ. ကျွန်တော်အခုအဆင်ပြေနေတဲ.နည်းလေးကို Share လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
(၂) Your Freedom ကို Configure လုပ်တဲ.အခါ Use Wizard ကိုသုံးပါ။အဲ.ဒီမှာချိတ်ဆက်လို.ရမယ်. Server List တွေပေါ်လာပါလိမ်.မယ်။အဲ.ထဲက Germany Server တစ်ခုခုကိုသုံးပါ။
(၃) Signup လုပ်တဲ.အခါမှာလည်း Country နေရာမှာMyanmarကိုမရွေးပဲ၊ Germany (Dutchland) ကိုသာရွေးချယ်ပေးပါ။
(၄) Connection အတည်ငြိမ်ဆုံးအချိန်ကိုသာရွေးချယ်ပြီး အကောင်.အသစ်လုပ်ပါ။
Zawgyi is not allowed.
ဘာမှလဲပြန်မပြောကြဘူး ၊ အိုကေနေကြပြီနဲ.တူတယ်။ :P
ရှိစုမဲ့စု ဂျီမေးလ်လေးတွေလဲကုန်ပြီဗျာ .... အသစ်ဖွင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူး (အသစ်လည်းဖွင့်လို့မရပါဘူး)... လက်ရှိသုံးနေတဲ့အကောင့်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခု request phone number တွေတောင်းကုန်ပြီ ..... ဟိုကျော် ဒီကျော်လုပ်လည်းမရ ... ရှာဖွေမှတ်ထားသမျှနည်းလမ်းတွေလည်းကုန်ပြီ .... ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲဗျာ .... :-((
ဂျီမေး အသစ်ကို android phone (china version မပါ)
အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ရှိရင် ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
ဘာမှ မတောင်းပါဘူး။ ကြိုက်သလောက်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
You need to change your proxy, too. Can't create with our Proxies. ^^
<code>ကျွန်တော်ဆီမှာ Your Freedom, Ultrasurf စတဲ့ Software များနဲ့ Free Proxy Site တွေသုံးပြီး ဖွင့်လည်းမရပါ။</code> I'm ok with freedom .
ဟုတ်တယ်ဗျဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို အကောင့်၅ခုပဲရတော့တယ်... :-?
Mail ထဲရောက်လာတာလေး လမ်းညွှန်ချင်ပါတယ်။ ရေးထားတာတော်တော်ရှည်လို့ လိုရင်းတိုရှင်း ပြန်ရေးပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။
http://bluworld.org/registration/account/signup.php ကနေဝင်လိုက်ပြီး ဖြည့်စရာရှိတာ ဖြည့်လိုက်ပါ။ Continue လုပ်ပါ Loading 10% ကနေ 90% လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် Security Question ဖြည့်ခိုင်းပါတယ်။ ပြီးရင် Create account ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို Account သစ်ဖွင့်ခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ။ Server ကျပ်ခြင်းနဲ့ Internet Connection မကောင်းခြင်းကြောင့် တစ်ခါတလေ Loading က 90% ကို မရောက်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ စိတ်ရှည်ရှည်ထား ဖွင့်ရတတ်ပါတယ်။
တစ်ခုရှိတာက Gmail Account သစ်ဖွင့်မှာဆိုရင် username @ gmail . com ထည့်ပေးရပါတယ်။ ဒါဆို Gmail sign in page ကနေ ဝင်ရင် username ရိုက်ထည့်ယုံနဲ့ ဝင်လို့ရပါပြီ။ Account Creation မှာ @ gmail . com ကျန်ခဲ့ရင်တော့ Gmail sign in page ကနေ ဝင်တဲ့အချိန်မှာ username @ blumail . org နဲ့ ဝင်ရပါလိမ့်မယ်။
PS. ကျွန်တော် မစမ်းသပ်ရသေးတဲ့အတွက် တကယ်ရမရတော့ အတတ်မပြောနိုင်ပါ။
user name ကို ၁၂ လုံးထက်ပိုပြီးပေးလို့ မရပါဘူးလို့​ပြောနေတယ်။ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ အကောင့်နာမည်ကို ဖွင့်လို့မရပါဘူး။ အကောင့်နာမည်နောက်မှာ @gmail.com ထည့်လို့ကို အဆင်မပြေနိုင်တာ။ သိတဲ့သူများ ဆွေးနွေးပေးကြပါဦး။
I can openanew gmail account with https://hidemyass.com .
Thankalot Haroon.
ဟုတ်တယ်အစ်ကို ၊ ကျွန်တော်လည်းဒီအတိုင်းပဲ။ ဒါပေမယ်. အကောင်.အသစ်လုပ်ရင်@gmail.com ကိုချန်ခဲ.ရင်တော.အဆင်ပြေပါတယ်။
ပြီးတော. gmail ကိုဖွင်.ပြီး [email protected] နဲ.၀င်ရင်မရဘူး ။ blumail.org မှာပဲ၀င်လို.ရတယ်။
တစ်ခုကောင်းသွားတာက gmail မှာမရပေမယ်. ၊ gtalk ကိုဖွင်.ပြီး [email protected] လို.ရိုက်ပြီး၀င်ရင်တော.ရတယ်ဗျ။ Interface ကလည်း gmail နဲ.လုံး၀ကိုချွတ်စွတ်တူနေတော.သုံးရတာအဆင်ပြေပါတယ်။
First name နဲ့ Last name မှာမြန်မာလိုဖြည့်
Security question မှာလဲ မြန်မာလိုပဲဖြည့်ပေး။ကျန်တာတွေကတော့ ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ဖြည့်သွားပေးပေါ့။
အားလုံး OK သွားလိမ့်မယ်။
အဲလိုဖြည်ထားတဲ့ မြန်မာစာလုံးတွေတောင် ကိုယ့်မေးထဲက chat box မှာပေါ် နေလိမ့်မယ်။
G-mail account လိုချင်သူများကိုလဲ အခုနည်းလေးမျှပေးလိုက်ကြပါ။
I think It's not too much difficult to createanew GMail account. All you have to do is to fill everything in registration form, even recovery email, security question. Too simple.
who can open gmail new account by pay money. I have too many people want to account.
thanksalot for sharing your idea.But I really still haveaproblem with all the method.If I can get some more idea, send to my account,please. It is "[email protected]".
October 2011 edited March 2012 Registered Users
doublezz ရေ ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်ဗျာ
I know about it.I can make easily to getanew gmail accout.First,You must clear the history in your broswer.After that,you can create it.
You will choose another countries instead of myanmar.
Thank you.Next tell me more.
ပြည်တွင်းမှ Gmail account လုပ်နည်း ဆိုပြီတွေ့တယ်ဗျ။ အောက်မှာ ။
I can create gmail acount by useing ultrasurf only. Use Internet explorer, Select country America. And the rest fill whatever you want. It doesn't ask verification code. Pls try.
နိုင်ငံမှာ united states ထားလိုက်ရင်ပီးတာပဲ
ပီးရင် create account လုပ်လိုက်ရင်ရပီ
I can create new gmail by money. If you want, plz contact me ( [email protected])
I can solve this problem by money. if you want, plz contact ([email protected])
I can solve this problem by Money, plz contact ([email protected])
Thank you to Doublezz. Ha HA I can create g-mail account.
TYpe user name,password and security answer by Myanmar font.
And you get...............
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အတွေ့အကြုံတွေကိုဆွေးနွှေးတင်ပြကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုပြောတာပါ။ အဓိက ကတော့ ဖုန်းနံပါတ် နှင့် တည်နေရာ ကို တလွဲတွေထည့်လိုက်လို့ အဆင်ပြေသွားပြီ။
BEST Method ... Go to http://www.pinger.com/textfree/
create pinger account & getatextfree number ...
go to gmail create account ... insert country box (United States)
if request ur phone number ... insert textfree number ... if they send msg
go to pinger log in find gmail msg ... copy what u see number ...
go back to gmail paste what u copy...
အာ ရတယ် တကယ်ရတယ် ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတယောက်ဆို အကောင်တွေအများၾကီးရိႈတယ် bluworld ကို ပြောတာ bluworld လား bluemail လား မသေချာလို့ တခုခုနဲ့စမ်းၾကည့်
အာ ရတယ် တကယ်ရတယ် ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတယောက်ဆို အကောင်တွေအများၾကီးရိႈတယ် bluworld ကို ပြောတာ bluworld လား bluemail လား မသေချာလို့ တခုခုနဲ့စမ်းၾကည့် @ bluemail.com ပေါ့ဗျာ
ခုဆိုရင် မြန်မာပြည်က ဖုန်းတွေက ဂူးဂဲလ် အကောင့်နဲ့ သုံးလို့ ရပါပြီ။ ဖုန်းနံပတ်မှာ မြန်မာပြည်လို့ ပေးထားပြီးတော့ မက်ဆေ့ မပို့ခိုင်းပဲ အသံဖုန်း ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ဂူးဂဲလ်ကနေ သင့်ဆီကို လျှိုဝှက်နံပတ် ပြောလိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ပထမဦးဆုံး Yourfreedom ကိုဝင်ပါ။
ပြီးရင် Your Freedom နဲ့ Browser နဲ့ချိတ်ပါ။
Your Freedom မှာတက်လာတဲ့ အိုင်ပီကို ကြည့်ပါ။ ဥပမာ အားဖြင့် IP က US IP ဆိုရင် Location နေရာမှာ US ကိုရွေးချယ်ပေးပါ။
ပြီးတော့ Human Verification ကိုလည်း တစ်ကြိမ်တည်း ဖြည့်ပေးပါ။ Your Current Email Address မှာ Email အမှန်ကိုဖြည့်ပေးပါ။ အဓိက အားဖြင့် ဖွင့်ခဲ့တာ ကြာပြီး သူ့ကို Secondary အများကြီးမလုပ်ထားတဲ့ဟာပါ။ ဒါဆိုရင် ဖုန်းနံပါတ် မတောင်းတော့ပဲ အဆင်ပြေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။